Manasongadina ny endrika endrika vaovao.
Ampifanaraho amin'ny rivotra ny rivotra
Mombamomba ny aerodinamika miaraka amin'ny lanjany maivana.
Ny fampiononana injeniera mety.
Karazana vokatra Fiarovan-doha amin'ny bisikileta
Laharana maodely Alim-by VC301
endri-javatra Famolavolana rivotra, maivana, rivotra mahery,
Manitatra safidy Volana fisakafoanana hariva
Fomba sy fampisehoana an-tsokosoko amin'ny hazakazaka, miaraka amin'ny sanda tsy miova. Ny fiarovan-doha dia mahavariana tokoa ho an'ny mpitaingina rehefa mankafy làlana lehibe toy ny hafainganam-pandeha haingana. ny endrika mahia dia manambatra ny rivotra mahavariana sy ny fahafaha-mahazo aina amin'ny rafitra mety sy ny lanjan'ny hazavana sy ny faharetan'ny fananganana bobongolo, tsy hampihena anao izany. Ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta dia feno hipetraka amin'ireo lafin-javatra tsara indrindra anananay, famenon-tsakafo mety indrindra amin'ny saika fitsangatsanganana rehetra. Izahay dia nanatsara ny famolavolana ny singa rehetra ao anaty fiarovan-doha, na ny endrika ho fiarovan-doha aza mba hampihenana ny lanja. Noho izany antony izany, nanao sary sokitra lehibe koa izahay tamin'ny alàlan'ny fantsom-panafody anatiny mba hananana herinaratra faran'izay tsara ao an-dakilasy.
Nampifangaroinay daholo ny géometry satroka miaraka amina microshell in-mould, izay mahatonga apperance maivana sy mendrika, ary ny fizotran'ny fandrosoana mandroso miaraka amin'ny PC dia manome fiarovana bebe kokoa mandritra ny mitaingina azy.
Ny fonosana mangatsiaka mangatsiatsiaka dia manome fampitaovana ahazoana aina sy maina haingana ho an'ny mpitaingina, ny harato mangatsiaka vita amin'ny lavarangana ivelany dia mihamangatsiaka kokoa amin'ny alàlan'ny famindrana fiarovan-doha, mifamatotra amin'ny polyfoam izay amin'ny hakitroka mety manome ny mety indrindra manodidina ny lohan'ny mpampiasa, ny lamosina ny lafiny dia soson'ny nylon borosy mifatotra amin'ny velcro hanamboarana tena azo antoka.
Namboarinay ny fiarovan-doha miaraka amin'ny mavesatra mahazatra antsika nandritra ny taona maro nanandrana ny anaylysis sy ny fanangonana angon-drakitra, matoky izahay fa ny haben'ny fiarovan-doha dia mety amin'ny mpanjifa.
Ny fiarovan-doha dia voamarina ho an'ny fenitra EN1078, CPSC ary AS / NZS 2063: 2020, mandritra ny fitsapana trano, ity fiarovan-doha ity dia manao tsara tsara ho an'ny fitsapana kurb mando sy fitsapana Hot hemi, ny fiarovan-doha maivana dia ny fiarovana ny fiarovana indrindra ho an'ny mpitaingina.
ITW buckle sy cam-lock dia manome fasten tena mafy ary mora ny mamoaka amin'ny tanana iray, raha mila buckles hafa ianao, afaka manolotra magnet bcukle miaraka amin'i Fidlock sy Osmar izahay mba hampiavaka ny vokatrao.
Ity syetem mety ity dia manana safidy telo azo ampifanarahana amin'ny endriny, dial dipoaka handaminana ny fihenjanana amin'ny tanana iray ary vita amin'ny fitaovana malefaka sy mateza izy io mba hialana amin'ny fahasimbana rehefa mihidy. Ny rafitra azo esorina sy azo soloina dia manome fanitsiana tonga lafatra amin'ny fanamorana.
Teo aloha: Ny fonosana PC marobe dia miaro ny fiarovan-doha scooter an-tanàna VU103
Manaraka: MTB Bike Helmet VM203
Helmetan'ny bisikileta tsara indrindra
Jiro fiarovan-dohan'ny bisikileta
Helmona bisikileta feno tarehy
Helmetsan'ny bisikileta an-dalambe
Volom-borona vita amin'ny lamaody